University of Essex - Study in England, i-United Kingdom
University of Essex Yokuxhumana
isifinyezo : EU
Ungakhohlwa xoxa University of Essex
Bhalisa at University of Essex
Kusukela ukuhlubuka umfundi 60s ucwaningo lwethu, umuntu owayephila ngesikhathi emhlabathini-breaking, asikaze amukela isimo noma kade uyesaba ukukhuluma. Thina njalo ngicabanga izindlela ezintsha futhi ezingcono zokwenza izinto. Izikole zethu kanye nabaholi uMnyango Sare e ucwaningo emhlabeni-class ukuthi sishintsha ukuphila.
Singabantu ekhaya abanamakhono futhi bayaphikelela, onesibindi futhi ngesibindi, futhi labo baphelelwa yisineke bafuna ushintsho. wesigodi Eliyinselele ungaphakathi DNA yethu. Uzoba obala ukubhekana nezinto eziningi ngezindlela ezahlukene kanye nemibono, njengalabo Cabanga yethu ezivusa inkanuko! inkulumo uchungechunge, okusho ukuthi ngeke nihlale nivumelana - kodwa lokho indlela imibono enkulu bezalwa.
Kuphela ngokukhuthaza kwenu ukubuza imibuzo enzima singagqashula imingcele ebhaliwe yengqondo. At Essex siwubonise emingceleni ulwazi kanye iphayona izixazululo ngezinto ezikhathaza global. Sikunikeza ilayisensi kwangempela ukuba balolonge lokho uya lapho ukhona futhi uthathe izingozi engqondo ukuze kanye nokufunda 'kanjani', you selelo 'kungani'.
At Essex thina khuthaza abafundi bethu ukubabela kube ubani kungcono alingane kodwa akekho ephakeme - ngesikhathi esifanayo ngaba nokuzethemba kodwa hhayi zidla, brilliant kodwa abathobekile. Uma ufuna more emfundweni eyunivesithi kunokuba nje ngezinga omuhle, uma ufuna ukuba ukukhanyiselwa futhi senze umehluko, Essex iyindawo ukuza.
Shansela, University of Essex kanye yokulwela inkululeko civil ekhankasela
Essex wethula wena abantu abavela kuzo zonke izingxenye planethi – sikwazi ukuxoxa 21 enyuvesi international kunazo zonke emhlabeni futhi 5th in the UK (THE 2016). Singabantu umphakathi wembulunga yonke ngobuqotho ukuthi uphila, imisebenzi, futhi udlala ndawonye. Utadisha lwemfundo nasemhlabeni wonke olufanele, bayakhuthazwa ukuba aphile futhi sitadishe kwelinye izwe isikhathi esiyiminyaka inkambo yakho, babe yingxenye yomphakathi wethu ohlukahlukene, futhi bafundiswa izifundiswa ogama ucwaningo has nomthelela global. Sikunikeza ithuba engcono ukuncintisana komnotho wembulunga.
Umqondo ubulungu livikeleke umthethosisekelo wethu futhi kuyisisekelo isipiliyoni sakho student. Ngokungafani nezinye umphakathi uke waba yingxenye ngaphambi, isikhathi sakho Essex inikeza namathuba amaningi ukwenza umehluko empilweni yakho siqu academic and social, futhi kulabo abaseduze kwakho.
Isikhathi phesheya akukho zindleko ezengeziwe.
Ngoqashekayo nemisebenzi ukweseka, hhayi kuphela ngesikhathi ulapha - kodwa ukuze bathole ukuphila
Uneminyaka ilungu ukuphila, nazo zonke izinzuzo ehambisana nayo kanye namathuba.
Over 165 amaqembu ezemidlalo kanye imiphakathi, omunye club eliphezulu kakhulu okungu umfundi e-UK.
Unique campus izindawo nge ezihlukahlukene izenzakalo kanye nezinsizakalo.
Umphakathi Essex ugcwele amathuba okuba zithole abantu abasha, uzame ukwenza izinto ezintsha futhi uthole amakhono amasha. Kungenzeka yini kube lula ukuba uhlanganyele engxoxweni benombono wokuphila emphakathini uma esewonke zethu. Kusukela Karaoke in the SU Bar itiye ntambama Wivenhoe House (ikhaya mayelana nesikhungo setfu se-Edge Hotel School). Ibhayisikobho kokuthola play at Lakeside noma Clifftown yeshashalazi zethu ukuze bagging ishibhile at emakethe abalimi bethu '- ngokuya kangaka akunakwenzeka ukuba uthole nesithukuthezi.
Computer Science and Engineering Electronic, School of
East 15 iBamba School
Impilo kanye Human Sciences, School of
Rights Centre Human
Izifundo imikhakha eyahlukene kule Humanities, Centre for
Institute for Social Nocwaningo Economic
Ulimi kanye neziLimi, uMnyango
Literature, ifilimu, and Theatre Studies, uMnyango
Mathematical Sciences, uMnyango
Philosophy and Art Umlando, School of:
Umlando ubuciko Essex
Psychoanalytic Ucwaningo, Centre for
UK Idatha Ingobo yomlando
Ngo-July 1959, Essex County Council wamukela isiphakamiso kusukela Alderman Leatherland ukuthi inyuvesi siqiniswe County. A Promotion iKomiti University kwakhiwa Usihlalo Nkosi uLieutenant ka Essex, Sir John Ruggles-Brise, okuyinto uhambise isicelo esisemthethweni kukomidi University Izibonelelo icela ukuthi University of Essex kufanele isungulwe. Imibiko yokuqala wasikisela ukuba iKomiti Promotion lalituse Hylands Ipaki e Chelmsford ukuze ibe yindawo University entsha, Nokho, ngo-May 1961, isisekelo inyuvesi amenyezelwa House of Commons ne Wivenhoe njengoba indawo encomekayo futhi kuZibandlela ngonyaka ofanayo, Wivenhoe Park u aluthola enyuvesi entsha. Ngo-July 1962, Albert Sloman, Gilmour UProfesa Spanish Dean of Faculty of Arts, University of Liverpool, ngamiswa njengephayona Usekela-Shansela kanye RT. yena. R. A. Butler, wamenywa ukuba Shansela, no-Anthony Rowland-Jones aqokwa njengelungu Registrar.
I uProfesa lokuqala kwamiswa Meyi 1963: Alan Gibson e Physics, Peter Townsend ku-Sociology, Donald Davie e nezincwadi zokufunda, Richard Lipsey e Economics, Ian Proudman eendaweni ze-IiMbalo, Jean Blondel e Uhulumeni, noJohane Bradley Chemistry. Wayesebenzisa intonga yayo kuqala lesisihlabelelo, lwentfutfuko enyuvesi yanyatheliswa futhi £ 1million Isikhalazo Isikhwama wethulwa. Phakathi nezinyanga eziyisithupha Isikhwama Isikhalazo kwase kudlulwe £ 1million yayo target Indlovukazi Umama Mnumzane Winston Churchillamong abanikeli, kuyilapho kwaqala umsebenzi eqothula indawo yokwakha umsebenzi. Ngo Autumn 1963, obomvu wakhethwa njengosuku umbala University kanye lemininingwane lokuqala wayezimisele futhi kwaqalwa umsebenzi we- izakhiwo lokuqala unomphela; block isayensi Igumbi kubhayela eduze Wivenhoe House. Ngo-January 1964, Hardy Amies yakhelwe izembatho ezifundweni senyuvesi nokufundisa maqhugwane yesikhashana kwadingeka esizokwakhiwa eduze Wivenhoe House, ngenkathi ngoMashi-Sir John Ruggles-Brise wamiswa njengombonisi Pro-Shansela kuqala futhi Alderman Leatherland noMgcinimafa lokuqala University. Ngemva kwezinyanga ezimbili senyuvesi Armorial Bearings yashicilelwa, nge isiqubulo “Babecabanga nzima, inhliziyo Keener”.
Ngo-October 1964, okokuqala 122 abafundi befika 28 efundisa abasebenzi ezikoleni ezintathu: ngokuqhathanisa Ucwaningo, NeSayensi kanye Izifundo zomphakathi. Iminyango of Chemistry, physics, Uhulumeni, Sociology, Literature, Mathematics kanye nezomnotho ukuvula kanye Centre ulimi (kamuva uMnyango Ulimi kanye neziLimi) kanye Computing Center (kamuva uMnyango Computer Science and Engineering Electronic) nge Denis yokukala akhethwe uMongameli wokuqala wabaFundi’ Council. Umsebenzi waqala phezu kombhoshongo lokuqala zokuhlala, Rayleigh, ngo-December nge The Queen ekuvunyweni isibonelelo uSomqulu ukuthatha nomphumela kusukela 11 Januwari 1965.
1965 alethwe 399 abafundi ababhalisela ukuze kuqale unyaka omusha zezemfundo; inombolo kwabafundisi izikhathi ezingaphezu kwezimbili kuya 61; kanye degrees lokuqala, ezinhlanu MSc futhi MA degrees ezinhlanu kwanikezelwa. Lesi sakhiwo Physics livuliwe eziyisithupha izibuya lokuqala Rayleigh umbhoshongo sebekufanelekela umsebenzi, ngenkathi umsebenzi owaqala Albert Sloman Library. Lo mlisa wokuqala zesifazane waqokwa: Dorothy E. Smith eMnyangweni Sociology. Ngo-December, Inkantolo University wahlangana okokuqala nge emhlabeni 500 amalungu. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, umsebenzi waqala Isifundo Theatre Isakhiwo, plus 'Scenic ukuphuma’ ka Keynes umbhoshongo.
Ngo-October 1966, the Hexagon Indawo yokudlela futhi Jikelele Isitolo wavula, nge inani labafundi ekufinyeleleni 750. Nkosi Butler wamiswa njengeNkosi Shansela emcimbini owawuse-Colchester sika Moot Hall 1967 kanye Degrees lokuqala Honorary banikezwe, Mace yeNyuvesi wathwalwa okokuqala, kuyilapho lokuqala lonyaka Sebandla Degree isaha 135 degrees gunya Julayi. Ekuqaleni konyaka wokufunda ozayo, iminyango Computer Science kanye Electronic Systems Engineering wamukela abafundi yabo yokuqala, the SSRC Data Bank (kamuva uqambe UK Idatha Ingobo yomlando) yasungulwa kanye Isifundo Theatre Isakhiwo kanye Library wavula kanye Isigaba sokuqala se-Studies Komphakathi kanye Comparative ekwakheni, ngenkathi umsebenzi wahamba phezu Tawney noWilliam Morris kwemibhoshongo yokuhlala.
On 25 November 2004, SoMkhulu wakhe Queen futhi uMbusi Edinburgh wavakashela inyuvesi njengengxenye wokuqeda unyaka kwasungulwa yayo 40 (1964-2004). Ezinye amalungu elide kakhulu ukugijima kwabasebenzi bamenywa ukuba baxoxe nabo ngesikhathi isethulo kuhlanganise umfundi wokuqala yeNyuvesi, John M. Dowden. Ukuqala ucwaningo postgraduate kwi fluid dynamics eneminyaka engu 23 e 1963, kamuva uJohane waba uprofesa wezibalo kanye wayeyinhloko uMnyango Mathematics University kusuka 2001-2005. Wabe esethatha umhlalaphansi ngo-September 2008.
Le nyuvesi njalo uyanda. I Network Centre isakhiwo wavula ngoMeyi 2004 izindlu uMnyango Electronic Systems Ubunjiniyela izingxenye uMnyango Computer Science (ngubani ahlanganisiwe e 2007 ukudala Computer Science and Engineering Electronic). Inyuvesi Quays, zezindlu umfundi yokuhlala eziyinkimbinkimbi 770 abafundi, wavula ngo-September 2003. I Ivor Crewe Isifundo Hall, nge 1,000 isihlalo umthamo, wavula e 2006. e Southend i-26M £ Gateway Isakhiwo wavula e 2007, a esasiyisonto aguquliwe kuya Clifftown Studios ukuhlinzeka East 15 abafundi nge nkundla, studios kanye workshop izikhala. University Square, a 560 ukuthuthukiswa lokulala eceleni ukuze isakhiwo Gateway wavula ngo-September 2010. Ngezinye Wivenhoe Park, le 'Social Science Research Centre’ laqedwa ngo-February 2007, Ezezindlu yeNyuvesi Institute for Social and Economic Ucwaningo UK Idatha Ingobo yomlando. Kwathengwa isakhiwo esiyisitezi omusha School Wezempilo Human Sciences kwavulwa 2008, njengoba kwakunjalo 'Centre for Brain Isayensi’ izindlu ingxenye umnyango Psychology. In 2013, I Meadows, entsha 540 enamakamelo umfundi yokuhlala eziyinkimbinkimbi wavula kwi Colchester Campus, futhi Forum, esesidlangalaleni futhi zezemfundo umtapo nokufunda isikhungo amasha e Southend. In 2015 emisebenzini emibili emikhulu yaqedwa ngo-campus Colchester: entsha isandiso Student Centre kanye Library, kanye zero new-carbon isakhiwo Business School ephelele yokudayisa phansi nge Bloomberg ezikhumulweni.
Wivenhoe House, i Manor endlini wangekhulu le-18 ku-Wivenhoe Park, savalwa ngo-December 2009 futhi yavula kabusha e 2012 njengoba ezine inkanyezi indlu ezweni ehhotela nekhaya we Edge Hotel School, onguMhlebi Uks ukusebenza esikoleni ehhotela ozinikele ekuthuthukiseni bakusasa lehhotela kanye hospitality industry kuqala.
Uyafuna xoxa University of Essex ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Essex kumephu
Izithombe: University of Essex Facebook ezisemthethweni
University of Essex Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Essex.